Sidee Buu Abiy Ahmed Ugu Hoggaamiyay Ciidamada Itoobiya Guusha Ay Ka Gaareen Jabhada Tigray | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Sidee Buu Abiy Ahmed Ugu Hoggaamiyay Ciidamada Itoobiya Guusha Ay Ka Gaareen Jabhada Tigray
Sidee Buu Abiy Ahmed Ugu Hoggaamiyay Ciidamada Itoobiya Guusha Ay Ka Gaareen Jabhada Tigray
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa soo kiciyay xusuusta boqorradii hore ee dalka Itoobiya soo maray isagoo tagay jiidda hore ee dagaalka si uu u hoggaamiyo dagaal ka dhan ah fallaagada Tigreega oo ku hanjabay inay xukunka ka tuurayaan.
Muuqaalo aan caadi ahayn oo laga dhex arkay nin loo aqoonsaday inuu yahay qofka 100-aad ee ku guulaystay abaal marinta caalamiga ah ee Nobel Peace Prize 2019, Abiy ayaa la sawiray isagoo xiran dharka millatari oo dhex lugeynaya dhul baadiyaha ah iyo buuro badan, isagoo muraayada indhaha ku eegaya oo la hadlaya askarta geedo hoostood.
Kjetil Tronvoll oo ah borofasoor ku takhasusay daraasaadka colaadaha waxna ka dhiga jaamacada Oslo New University College ee dalka Norway ayaa sheegay in aanu shaki ku jirin in go’aanka Abiy uu ka caawiyay in ay jihada ka rogto kooxda Tigray People’s Liberation Front (TPLF).
“Inkasta oo ay sawiradu muujinayaan in uu ku dhow yahay jiidaha hore ee dagaalka oo aanu ku jirin dagaalka dhabta ah ee dagaalka, haddana go’aankiisu waa miro dhalay,” ayuu yiri.
“Waxay kor u qaaday niyadda Jeneraaladiisa, waxay horseedday in waddaniyadda Itoobiya ay sare u kacdo, waxa la arkay geesiyaal qaran oo uu ka mid yahay Haile Gebrselassie oo u soo baxay taageerada halganka, kumannaan qof ayaa safaf dhaadheer u galay si ay ugu biiraan ciidammada iyo jabhadaha Amxaarada. ”
Dib u dhaca TPLF soo wajahday ayaa ahaa mid aad u wan dagaalyahanadeeda ayaa ku sugnaa agagaarka magaalada Debre Birhan, oo qiyaastii 130km u jirta caasimadda Addis Ababa, ka hor inta aan lagu qasbin inay dib ugu laabtaan 400km ilaa Weldiya.
“Waan aragnay sida Ciraaq, Suuriya, Yemen iyo Liibiya ay u burbureen ama u kala tageen, laakiin Itoobiya waa dal ay ku nool yihiin in ka badan 120 milyan oo qof. Markaa isku day kasta oo lagu khalkhalgelinayo dalkan waxay dib ugu noqon kartaa iyaga,” ayuu u sheegay warbaahinta dowladda Mr Gebrselassie, oo ah halyeygii orodka ee Itoobiya.
“Waan ogahay in walaalaheen Afrikaanku ay na taageerayaan oo aan gumeysiga si wadajir ah ula dagaalamaynay qarniyo.”
Bishii Nofembar, Mr Abiy waxa uu barbardhigay isku daygii TPLF ee ay ku doonaysay in ay ku afgambiso dawladiisa iyo kuwii Talyaanigu soo duulay ee lagaga itaal roonaaday dagaalkii caanka ahaa ee Adwa 1896kii oo ay ku jabiyeen ciidankii Imbaraadoor Menelik II, oo ahaa aasaasihii Itoobiya casrigan, kana soo jeeday Amxaarada.
TPLF waxa ay ahayd jabhad awood ku yeelatay Itoobiya 1991. Waxa ay xukunka haysay ilaa 2018, markaas oo Mr Abiy uu xafiiska la wareegay ka dib mudaharaadyo waaweyn oo lagaga soo horjeedo xukunkeeda caburinta ah.
Kadib waxa ay dib ugu guratay deegaanka ay ku xooga badan tahay ee Tigray, halkaas oo ay ka bilowday kacdoon sanadkii hore ka dib markii ay isku dhaceen Abiy isbedelada uu sameeyay awgeed.
Falanqeeyaha Geeska Afrika Cabduraxmaan Sayed oo fadhigiisu yahay UK ayaa sheegay in Abiy uu kasbaday ixtiraam dad badan oo Itoobiyaan ah isagoo u aaday jiidaha hore ee dagaalka si uu hormood u noqdo iska caabinta maadaama caannimadiisu ay sii yaraanaysay markii ay jabhaduhu sii hormarayaan.
“Kadib markii uu ka tagay hoygiisa rasmiga ah oo uu ku biiray ciidankiisa, Mr Abiy waxa uu diray fariinta ah in uu diyaar u yahay in uu u dhinto Itoobiya, haddii loo baahdo,” ayuu yiri.
“Wuxuu aad ugu mashquulsan yahay taariikhda boqorrada Itoobiya, wuxuuna mar u sheegay dadkii dhegeysanayey in hooyadii saadaalisay inuu u noqon doono boqorka toddobaad.
Prof Tronvoll ayaa sheegay in ficillada Mr Abiy ay ahaayeen kuwo aan horay loo arag oo ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel-ka oo ah sharaf la siiyay 2019-kii inuu soo afjaray colaaddii Eritrea iyo inuu isbedello siyaasadeed ka sameeyay Itoobiya ka dib tobanaan sano oo cadaadis dowladeed.
“Barack Obama wuxuu ku guuleystey abaalmarinta markii uu noqday madaxweynaha Mareykanka, waxaana uu dagaal ka geystay Afgaanistaan, laakiin wuxuu fariistay Aqalka Cad, Mr Abiy waa qofkii ugu horreeyay ee u dhawaada jiidaha hore,” ayuu yiri.
Abiy ayaa markii hore dabayaaqadii bishii November aaday dhanka jiidda bari, halkaas oo ciidamada gaarka ah iyo maleeshiyaad ka soo jeeda gobolka Canfarta ee Itoobiya ay horeba khasaare lixaad leh ugu geysteen kooxda TPLF.
“Cafartu waa jaarka xiga ee qoomiyada Tigreega, dhaqan ahaan waxaa lagu tiriyaa inay yihiin dagaalyahano, ku dhawaad nin kasta oo Canfar ah wuxuu qori lahaa da’da 15 sano jir, waxay sameeyeen iska caabin xoogan oo ay kala hortageen kooxda TPLF, waana markii ugu horeysay. Haweenka Canfarta ayaa dagaalka ka qayb qaatay,” ayuu yiri Mr Abdurahman.
“Waxay muujisay carada qotoda dheer ee ay u qabaan TPLF sababtoo ah xasuuqii ay dagaalyahanadeedu ka geysteen Canfarta markii ugu horeysay ee ay isku dayeen inay ka baxaan Tigray ilaa lix bilood ka hor.”
C/raxmaan ayaa arrintan u arka mid wax ka bedela dagaalka, maadaama ay fashilisay isku daygii ay kooxda TPLF ku doonaysay inay ku gaarto xuduudka Djibouti, Itoobiya waa mid aan bad lahayn, dekedda Jabuutina waa halbowlaha dhaqaalaha.
“Hadii kooxda TPLF ay gacanta ku dhigi lahayd wadada soohdinta, dhaqaalaha Itoobiya ayaa jilbaha dhulka u dhigi lahaa, wax alaab ah oo Addis Ababa soo gaari lahaana ma jiri lahayn, rajada caasimadduna inay u gacan gasho qoomiyada Tigray-gu way badnaan lahayd”.
Mr Abiy ayaa ka soo laabtay jiida hore ee dagaalka muddo ku dhow laba todobaad, kaliya markii uu xafiiskiisa ku dhawaaqay todobaadkan inuu dib ugu laabtay hogaaminta milatariga ee qabsaday dhul badan oo ka tirsan gobolka Axmaarada.
Kooxda TPLF ayaa dhankeeda sheegtay in ay dib ula wareegeen magaalada Kaniisada taariikhiga ah ee gobolka ee Lalibela.
Dhanka Prof Tronvoll, hogaamiyaha Itoobiya ayaa laga yaabaa inuu ku guulaystey inuu xukunka sii hayo, laakiin wuxuu xumeeyay sumcadiisa caalamka:
“Ujeeddada ugu dambeysa ee qofka ku guulaysta nabada Nobel waa inuu nabad ahaado, laakiin Mr Abiy wuxuu ku celceliyay baaqyo xabbad joojin ah, iyo ciidamada ayaa gaystey tacadiyo baahsan”.
Laakin Mr Abdurrahman ayaa sheegay in Abiy uusan lahayn doorasho kale oo aan ahayn in uu dagaalamo maadaama kooxda TPLF ay go’aansatay in ay awood ku soo ceshato maamulka.
“Ma garanayno inta uu dagaalkani socon doono iyo sida uu ku dhamaan doono, balse Mr Abiy waxa uu muujiyay in aanu ahayn mid dabada ka riixaya.”
Waxaa tarjumay Maxamed A Caseyr
Sidee Buu Abiy Ahmed Ugu Hoggaamiyay Ciidamada Itoobiya Guusha Ay Ka Gaareen Jabhada Tigray was last modified: December 17th, 2021 by Admin
Kiisaskii ugu badnaa ee xanuunka Karoona oo laga diiwaan galiyay dalka UK.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Oo La Kulmay Dhiggiisa Dalka Turkiga
Maxay ka wada hadleen ninka ugu taajirsan adduunka iyo madaxweyne Erdogan?
Ra’iisul Wasaare Khayre Iyo Guddoomiyaha Gobalka Banaadir oo Ka Wada Hadlay Horumarinta Caasimadda
Ciidamada Xoogga dalka oo howlgalo ka sameeyey Gobalka Shabeelada Hoose.
Madaxweynaha Jubbaland oo ku dhawaad 2 sano kadib magacaabay golihiisa wasiiradda
Dowladda Soomaaliya oo shaacisay xilliga ay bilaaban doonaan Duulimaadyada